ဖုန်းနဲ့ ကာရာအိုကေဆိုချင်တဲ့သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံး App ၅ ခု – MyTech Myanmar
ဖုန်းနဲ့ ကာရာအိုကေဆိုချင်တဲ့သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံး App ၅ ခု
သီချင်းဆိုရတာကတော့ လူတိုင်းနီးပါးကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာတစ်ခုပါ။ နေ့တိုင်းလိုလို ညည်းနေစရာမလိုပဲ ကာရာအိုကေဆိုင်သွားစရာမလိုပဲ ကိုယ့်ဖုန်းနဲ့ပဲ ကာရာအိုကေဆိုနိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာပြောသွားမယ့် Applications လေးတွေပဲ ကိုယ့်ဖုန်းထဲထည့်ထားလိုက်ပါ။
ဒီ Application ကတော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ သီချင်းအကုန်လုံးနီးပါးကို ရှာဖွေသီဆိုနိုင်မှာပါ။ အသုံးပြုရတာလည်းအလွန်လွယ်ကူပြီးတော့ အားနည်းချက်တစ်ခုက အချို့သောသီချင်းတွေကိုတော့ အခမဲ့မရပဲ ဝယ်ယူရတာဖြစ်ပါတယ်။
2. The Voice : On Stage
ဒီ Application ကတော့ ဒီအတိုင်း အပျော်သီချင်းဆိုတာထက် ပိုပြီးပြုလုပ်လို့ရတဲ့ App တစ်ခုပါ။ ကိုယ်ဆိုလိုက်တဲ့သီချင်းကို Audio Effects တွေထည့်သွင်းပြီး Social Media မှာ ပြန် Share နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အခု App လည်း Themes တွေမျိုးစုံရွေးချယ်နိုင်တဲ့အတွက် နာမည်ကြီးတဲ့ Application တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ သီချင်းပေါင်းများစွာရွေးချယ်သီဆိုနိုင်မှာပါ။ အားနည်းချက်ကတော့ စုံတွဲအနေနဲ့ သီဆိုလို့မရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
4. Karaoke Online : Sing & Record
အခု App ကတော့ အပျော်တမ်း စိတ်ပြေလက်ပျောက်လောက်ပဲ ဆိုချင်တဲ့သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုရင် အခု App က သီချင်းတွေအများစုက YouTube ကနေ ရယူတဲ့အတွက် အသံပိုင်းဆိုင်ရာမှာ အရမ်းကောင်းတဲ့အထဲမပါဝင်ပါဘူး။
ဒီ App ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း အများအပြားသုံးစွဲနေတဲ့ App တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သီချင်းတူတူဆိုလို့ရသလို Account တစ်ခုဖွင့်ပြီးတော့ ကိုယ့် Timeline မှာ သီဆိုထားတဲ့ သီချင်းတွေကို စုပြီး နားထောင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
MyTech Myanmar2017-12-18T16:02:23+06:30December 18th, 2017|Mobile Phones|